Uzibulele othi wadlwengulwa kepha wangavunyelwanga ukuvula icala | News24
Uzibulele othi wadlwengulwa kepha wangavunyelwanga ukuvula icala
Punjab province – Owesifazane wasePakistan osemncane, uzokhele ngomlilo ngemuva kokuthi ethe unqatshwelwe ukuvula icala kulandelwa ukudlwengulwa ozakwabo bemhlanganyele, kusho izishoshovu ngoLwesithathu.
Amaphoyisa amabili aseboshiwe kulandela ukuthi uSonia Bibi, obalelwa eminyakeni eko-18 ubudala, ezithungele ngomlilo ngoLwesibili ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa eMuzaffargarh.
Ube esephuthunyiswa esibhedlela, ngebhadi washona ngenxa yokusha kabi.
OLUNYE UDABA: Udlwengulwe wabulawa wafakwa esitamkokweni
“Singaqinisekisa ukuthi uSonia uzibulele ngokuthi azishise. Ubesola amaphoyisa amabili ngokumdlwengula ethi akekho umuntu obemnakile ngesikhathi ezama ukuvula icala,” kusho okhulumela amaphoyisa uNabila Ghazanfar etshela i-AFP.
“Sesijube ithimba elizophenya ngalolu daba,” esho.
U-Awais Malik, oyisikhulu samaphoyisa eMuzaffargarh, ukuqinisekisile ukuthi la maphoyisa amabili aboshiwe kwathi umkhuzi wesiteshi wamiswa kulandela ukungathathi zinyathelo ngalolu daba.